Nhau - Bhokisi Transformer Kuenzanisa
Bhokisi Transformer Kuenzanisa
Bhokisi reEurope rinova rakakura, mutengo waro wakaderera, uye bhokisi reAmerica rinova diki, chimiro chayo chakakwana. Inenge 1/3-1/5 yebhokisi reEurope rine simba rakafanana, uye chimiro chayo chakanaka. Kunyangwe iyo mutengo wakakwira zvishoma, bhokisi reAmerica rine hunhu hweakavimbika magetsi ekupa, inonzwisisika chimiro, kukurumidza kuisirwa, kuchinjika kushanda uye zvichingodaro. Inogona kushandiswa zvose kunze uye mukati.
Musiyano uripo pakati peAmerican box transformer neEuropean box transformer ndewekuti American box transformer idhizaini yakabatana yetransformer cores, high voltage load switch, fuses ekudzivirira uye zvimwe midziyo, inoiswa mutangi rimwe chete remafuta. Ine zvinotevera maitiro:
(1) Mabhokisi eAmerica madiki muhukuru uye akabatana muchimiro, angangoita 1/3 yemabhokisi eEuropean ane huwandu hwakafanana muChina.
(2) Bhokisi reAmericanstyle rine chisimbiso chakazara uye chakazara insulated chimiro chinogona kuchengetedza zvakavimbika chengetedzo yako pasina insulating chinhambwe.
(3) American box transformer inogona kushandiswa kwete chete muloop network, asiwo mune terminal. Shanduko iri nyore kwazvo, iyo inovandudza kuvimbika kwesimba rekupa.
(4) Kuremerwa kwakasimba;
(5) Kurasikirwa kwakaderera, S9 kana SH mhando inogona kusarudzwa;
(6) Iyo yakakwira voltage cable musoro inotora zvigadzirwa zvekambani, izvo zvinogona kushanda 200A mutoro wazvino, magetsi plug-uye-dhonza semutoro switch munguva yekukurumidzira, uye ine hunhu hwekushanda kuri nyore uye kuchinjika kwe disconnector.
(7) Kudzivirirwa kwefuse kaviri kunogamuchirwa kudzikisa mutengo wekushanda.
(8) Mafuta ekubatidza akakwira (akareba se312 C) anogona kushandiswa muzvivakwa.
(9) Anti-corrosion dhizaini uye yakakosha kupfapfaidza kurapwa kwebhokisi muviri.
Nguva yekutumira: Jun-24-2019